सत्य निरुपणका अड्चन- विचार - कान्तिपुर समाचार
सत्य निरुपणका अड्चन
ऐन संशोधन, आवश्यक बजेट, दरबन्दीअनुसारको दक्ष जनशक्ति र मुकामस्तरीय कामका लागि स्रोतसाधनको उपलब्धताले मात्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लक्षित गन्तव्यमा पुग्न सक्छ ।
माघ २९, २०७४ मञ्चला झा
काठमाडौँ — ‘हामीले न्याय कहिले पाउने ? तपार्इंहरूबाट पनि अब कुनै आस छैन, बाँच्नुको कुनै अर्थ रहेन,’ द्वन्द्वकालमा बलात्कृत एक महिलाले पीडा पोखिन् । ‘तपाईंहरू आयोगमा खालि जागिर खान आउनुभएको हो ? हामीले न्याय कहिले पाउने ? कि त छाड्नोस् कि त न्याय दिलाउनुस्,’ आक्रोशित स्वरमा एक जमात पीडितले कार्यकक्षमा प्रवेश गरेरै भने ।
आयोगमा उजुरी हालेका पीडितहरूले भेटका क्रममा वा टेलिफोन सम्पर्कमा सधैंजसो एउटै प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘हाम्रो उजुरीमा के हँुदै छ ? हामीले न्याय कहिले पाउने हो ?’ पछिल्लो सयम त यो प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ । पीडित, सरोकारवालालगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबैले यतिखेर उठाएका एकमुष्ठ प्रश्न भनेकै आयोगले तीन वर्षमा किन अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भन्ने हो । यो आलेखमा आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुको कारण, आयोगको चुनौती र गरेको काम विषयमा केही कुरा संक्षेपमा राख्न चाहेकी छु ।
अपेक्षित काम नहुनुको कारण
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने यो आयोग आठ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते गठन भयो । यस अन्तरालमा मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव सामाजिक जीवनमा पर्नु स्वाभाविकै थियो । बिस्तारै द्वन्द्वका घाउहरूमा खाटा बस्न थालेको र सहिष्णु नेपाली समाज मेलमिलापतिर अघि बढिसकेको अवस्था थियो । त्यसैले आयोग जहाँ पुग्थ्यो, पीडितहरूले पीडाभन्दा नि ‘हाम्रो घाउ फेरि किन बल्झाउन आएको हो’ भनी आक्रोश पोख्थे । बदलिएको सामाजिक परिवेशमा आयोगको उद्देश्य, काम र आयोगप्रति विश्वास दिलाउन नै लामो समय कसरत गर्नुपर्‍यो । आयोग गठनलगत्तै गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण यसको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि जनशक्ति स्रोतसाधन जुटाउनमै करिब एक वर्ष लाग्यो । यसबीच द्वन्द्वपीडितभन्दा पनि भूकम्पपीडितप्रति राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित भएको थियो । अर्कोतिर संविधान निर्माणको परिवेशमा सत्ता फेरबदलको खेलमा राजनीति रुमल्लिएका कारण सरकारको प्राथमिकतामा आयोग पर्न सकेन । यहाँसम्म कि आयोगको नियमावली पारित हुन नै १३ महिना लाग्यो ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग केही निश्चित समयावधिका लागि गठित आयोग हो । यसको काम फास्टट्रयाकमा हुनुपर्छ । अल्पकालीन यस्तो आयोगलाई चाहिने बजेट, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधन व्यवस्थापन पनि शीघ्र तवरले हुनुपर्छ । तर यो आयोगको कामलाई उही पुरानो मान्यता, प्रणाली र प्रक्रियामा चलाउन खोजियो । ऐनले स्वायत्त र उच्चस्तरीय भने पनि बजेटदेखि कर्मचारीसम्मको व्यवस्थापनका लागि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रशासनतन्त्रका कारण सरकारी कामको शैलीभन्दा यसको काम गराइ फरक हुन सकेन ।
द्वन्द्व अन्त्यको लामो अन्तरालपछि गठित यो आयोगबाट छिटो न्याय निरूपण होस् भन्ने एकातिर पीडितहरूको स्वाभाविक चाहना छ तर अर्कोतिर आयोगभित्र र बाहिर काम छिट्टो होस् भन्ने सर्वथा इच्छाशक्तिको अभाव देखियो । पछिल्लो समयमा आयोगभित्र देखिएको विवाद र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिजन्य कारणले आयोगका काममा पुग्न गएको अवरोध र छिटोछरितो टुंग्याउनुपर्ने कामका लागि पनि महिनौंसम्म अल्झिरहनु, निर्णयमा पुग्न नसक्नु आयोगको कमजोर पक्ष हो । विभिन्न मुकामबाट अनुसन्धान गरिएका उजुरीमध्ये ऐनको क्षेत्राधिकार, प्राप्त बजेट र जनशक्तिलाई मात्र परिचालन गरेर भए पनि ३ वर्षभित्र कम्तीमा १ सय उजुरी नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्न सक्थ्यो । तर पाएको क्षेत्राधिकार पनि प्रयोग गर्न आँट देखाउन नसक्नु आयोग चुक्नु हो । राजनीतिक दलहरूको प्रबल इच्छाशक्तिबिना यो आयोगको काम अघि बढ्ने देखिन्न । हिजोका द्वन्द्वरत पक्षहरूमा आफू दोषी देखिने डर र त्रास पनि छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का केही अस्पष्ट र बाझिएका प्रावधानले गर्दा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको परिणाम दिन आयोगलाई गाह्रो छ । ऐनमा गम्भीर अपराध र गम्भीर प्रकृतिको अपराधको चर्चा गरिए पनि परिभाषा केही गरिएको छैन । यातनालाई गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भने पनि प्रचलित कानुनमा यसलाई अपराधीकरण नगर्नुका साथै हत्या, बलात्कारका घटनामा प्रचलित कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था हुनु र द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाले त्यो समयसीमा नाघिसक्नुले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिने घटनाहरूमा पीडितले न्याय कसरी पाउलान् ? पीडितहरूबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।
आयोगले खेप्नुपरेको अर्को चुनौती भनेको विश्वासको संकट हो । आयोगभित्रको विवाद र कार्यशैलीले गर्दा एकातिर पीडित र सरोकारवालाले नै पत्याउने अवस्था छैन भने अर्कोतिर आयोगको कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सर्वोच्चको २०७१ फागुन १४ को फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगका काममा सहयोग नगर्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
आयोगमा हाल ६५ हजार ६ सय १५ थान उजुरी परेका छन् । तर ती सबै द्वन्द्वसितै सम्बन्धित वा ऐनले दिएको क्षेत्राधिकरभित्रै पर्छन् भन्न मिल्दैन । यसका लागि अनुसन्धानका क्रममा क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने र आवश्यकतानुसार फेरि जगाउने पनि प्रावधान छ । तर पीडितहरूबाटै नियमावलीमा रहेको तामेलीसम्बन्धी प्रावधानलाई नै खारेज गरिपाउँm भनी पटकपटक सर्वोच्चमा परिरहेको रिटले आयोगका काममा अगामी दिनमा झन् चुनौती थप्ने देखिन्छ । यसका साथै द्वन्द्वका क्रममा प्रयोग गरिएका बालसेना, मारिएका सुरक्षाकर्मीको सवालमा ऐनले केही नबोलेको तर यी निकायबाट आफूहरूलाई पनि पीडितको परिभाषाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने दबाबका कारण उनीहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन कसरी गर्ने, आयोगलाई कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न कठिन छ ।
आयोगले गरेका काम
आयोगले ती वर्षमा सरोकारवालाको अपेक्षानुसारको परिणाम दिन नसकेकै हो । तर यसको अर्थ आयोगले केही गरेकै छैन भन्न मिल्दैन । अनेक समस्या र चुनौतीमाझ पनि आयोगका लागि कार्यालय व्यवस्थापनदेखि ११ वटा निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण, आयोगमा प्राप्त प्रत्येक उजुरीको छुटाछुट्टै फाइल खडा गरी व्यवस्थापन, द्वन्द्व प्रभावित ७३ जिल्लामध्ये ७१ जिल्लामा आयोग स्वयं पुगेर पीडितको चाहना बुझी नेपाल सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउने काम भएको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाइसकेको छ । पठाइएका ७ हजार फाइलमध्ये १३ सय थान उजुरीमा अनुसन्धान भएर आयोगमा आइसकेको छ र बाँकी उजुरीहरूमा अनुसन्धान जारी छ ।
२०७४ माघ २२ गते सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद १ वर्षका लागि थपेको छ । तर म्याद थप्नु नै समाधान हैन । संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यता सत्यतथ्यको खोजी, परिपूरणको सिफारिस, मेलमिलाप र कानुनी कारबाहीको सिफारिस तथा संस्थागत सुधारका लागि आयोगले २०७२ पुस १ गत्ते पठाएको ऐन संशोधनको आठबुँदे प्रस्ताव तथा सर्वोच्चको फैसलाअनुसारको ऐन संशोधन, आवश्यक बजेट, दरबन्दीअनुसारको दक्ष जनशक्ति र मुकामस्तरीय कामका लागि चाहिएको स्रोतसाधनको उपलब्धताले मात्र आयोग लक्षित गन्तव्यमा पुग्न सक्छ । यसका साथै आयोगले पनि आफ्नो कार्यशैली र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वमा द्वन्द्वबाट गुज्रिएका चालीसभन्दा बढी मुलुकमा सत्य निरूपणजस्ता आयोगहरूको व्यावहारिक अभ्यास भएको देखिए पनि थोरैमा मात्र सफल भयो । अधिकांश आयोग असफल हुनुका कारण नै माथि उल्लिखित तत्त्वहरूको उपलब्धतामा सरकारको उदासीनता नै प्रमुख हो । नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वको प्रकृति र उद्देश्य बिल्कुल भिन्न थियो । राजनीतिक जगमा भएको द्वन्द्व दलहरूकै समझदारीमा टुंगिएको हो । विश्वमै उदाहरणीय बनेको विस्तृत शान्तिसम्झौता र त्यही सम्झौताको उपज सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय निरूपणको काम सम्पन्न नगरेसम्म नेपालमा संक्रमणकालको अन्त्य भइसकेको मान्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र नेपालले द्वन्द्वकालमा यस्ता ६ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको र मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा विश्व्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुने पछिल्ला केही घटनाले समेत पुष्टि गरिसकेको यथार्थलाई राजनीतिक दलहरूले पनि नबुझेका हैनन् । त्यसैले द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्याय निरूपणमा ढिलाइ गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई बढावा दिनु हो, जो कुनै स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस आयोगको कामलाई जति ढिलाइ गर्‍यो, त्यति धेरै बेफाइदा हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष, राजनीतिक दल, पीडित र पीडकलाई पुग्ने भएकाले यथाशीघ्र यसको उत्तरायण हुनु आवश्यक छ । नत्र पटकपटक म्याद थप गर्नुको मात्रै कुनै औचित्य देखिन्न ।
झा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोगकी सदस्य हुन् ।
प्रकाशित : माघ २९, २०७४ १०:२१
छाती पिट्दै रमधनियाँ काकी आँगन पसिन् । अन्तिम वाक्य पूरा नसुन्दै इजोरियाको आँखा वरिपरि अन्धकार छायो । एकछिनमै गाउँ नै स्तब्ध बन्यो।
चैत्र १९, २०७३ मञ्चला झा
धत् बदमास ! सिरानीमा झुन्डिएको ऐना हेर्नेबित्तिकै उनको मुखबाट फुत्केको थियो यो आवाज, मदमस्त निदाइरहेका अल्लारे पतिको गाला चिमोट्दै उनी एक्लै बर्बराइन्, अरूले देखे भने के भन्ला हँ ? लाज पनि लाग्दैन !
गौना भएर ८ महिनाअघि घर भित्रिएकी इजोरियाको गर्धनमा प्रथम मिलनको रातमा पनि यस्तै चुम्बनको दाग बसेको थियो । कम्ता जिस्काएका थिएनन् नन्दहरूले । लाजले त्यसबखत भुतुक्क भएकी थिइन् उनी । बाहिर वसन्त ऋतुको मन्दमन्द बयारसित बारीमा फुलेको चमेलीको सुवास उनको सानो कोठालाई नै मग्मगाएको थियो । कोइलीको कुहुकुहु मन चोर्ने मीठो वसन्ती गायनले ब्युँझाएको थियो त्यो बिहान उनलाई । शरीर अलिक थकित तर मन प्रफुल्लित थियो उनको । मनको प्रसन्नताले शरीरको थकानलाई पनि दूर गर्दो रहेछ । आखिर थकान पनि त परिस्थितिजन्य कारणमाथि निर्भर हुने हो । प्रेमालाप र त्यसपछिको संसर्गको त्यो रातले इजोरियालाई अझै कुत्कुत्याएको थियो । राति अबेरसम्म चन्द्र फागु गीतमा झुम्मिएकाले सुत्न अलिक ढिला फर्केका थिए, त्यो रात । मधेसमा फागुको रौनक नै बेग्लै । एक साता दस दिन अघिदेखि नै फागु गाउने चलन भएकाले दलानभरि होरी गाउनेहरूका साथ झुम्मिएका थिए चन्द्र पनि । महाराजाके द्वार मच्चैया होरीको धुनमा अह्लादित पतिको त्यो मुद्रालाई कोठाको स्यानो खिड्कीबाट लुकी–लुकी चियाइरहेकी इजोरियाको मन आनन्दातिरेकमा बगिरहेको थियो । चन्द्रले कम्ता माया गरेका थिएनन् त्यो रात इजोरियालाई ।
पूर्वी क्षितिजमा उदयाञ्चल उषाकालीन भाष्करको लालीमाझैँ यत्रतत्र मागभरि फैलिएको सिन्दुरलाई नवविवाहित इजोरियाले आँचलको खुँटले मिलाउँदै गर्दा उनको दृष्टि भित्तामा झुन्डयाएको घडीमाथि टक्क अडियो । आमाले दाइजोमा दिनुभाको त्यो घडीमा बिहानको ६ बज्न लागेछ । सधैं बिहान पाँच बजेसम्म उठिसक्ने इजोरियालाई आज उठ्न निकै ढिलो भएछ । ला ! आज त सासूआमाको गाली खाने भइयो । अहँ, तर यसमा मेरो के गल्ती ? सबै उनको छोराले गर्दा त हो नि ! भर्खर सत्र वसन्त पार गरेकी इजोरियाको बालापनले तत्कालै जवाफ फर्कायो । हत्त न पत्त साडी मिलाउँदै उनी सुटुक्क कोठाको ओसारामा निस्किन् । धन्य कोही उठेको रहेनछ । सबलाई बिहानीको वसन्ती पवनले मत्याएछ सायद । आमाले बालक बेलादेखि नै सासू, ससुरा, जेठानीले अह्राएको काम गर्नु एक वचन नफर्काउनुको सिखलाई माइतीबाट विरासतमा ल्याएकी छे इजोरियाले ! सायद, त्यसैले होला आठ महिना भो गौना भएको सबैको प्यारी छिन् उनी । सधैंझैँ आज पनि उनी कर्तव्यपरायण बुहारीको भूमिका निर्वाह गर्दै चुलो लिपपोत गरिन्, रातिको जुठो भाडाको रास माझिन् र भैँसीको बाक्लो दूधको चिया बसालिन् । बिहानीको चिया खाइसकेपछि मात्र जेठानीले पनि उनलाई भान्छामा सघाउँछिन् । सबैको खुसीका लागि मैले यति गरदिँदा के नै बिग्रिन्छ र ? घरमा स–साना कुराले कलह गर्नुभन्दा सके जति गरदिँदा नै वेश । गत वर्ष मात्र कक्षा दस पास गरेकी इजोरियालाई राम्ररी थाहा छ, शान्तिमै सुख र आनन्द छ भनेर । पढ्ने मन त अरू थियो उनको तर बीचमा बिहे भएरै रोकियो । चन्द्रले त उनलाई जति पढ्न मन छ, पढाइ खर्च म बेहोर्छु भनेकै छ । विवाहअघि मात्र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको चन्द्रलाई पनि लोक सेवा परीक्षाको तयारी गर्ने सुर छ, त्यस बेला सँगै पढ्ने सोच बनाएकी छन् इजोरियाले पनि ।
काँचको ठूलो गिलासमा चिया लिएर इजोरिया सासूको अगाडि राख्न नपाउँदै सासूले गोडा जोडिहालिन् घुम्टोले छोपिएको माथ गोडामा राखेर आशीर्वाद थाप्नु बिहानको नित्यकर्म नै थियो उनको । घर खान पठाउनअघि हजुरआमाले पढाएको पाठ सबै कण्ठ छ उनलाई । बिहानको सात बज्न लागेछ चन्द्र अझै उठेको चाल नपाएपछि उनी चियाको अर्को गिलास लिएर आफ्नो कोठातिर लागिन् । एउटा गोडा सिरकमाथि र अर्को सिरकभित्र राखेर गधा बेची निदाएझैँ मस्त निदाएको रहेछ यतिखेरसम्म चन्द्र । केही महिनाअघि मात्र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका पतिलाई यसरी निदाएको देख्दा इजोरिया एक छिन गम्भीर भएर सोच्न थाल्छे, कहाँ सुत्न पाइन्छ र यसरी ? मेसिनझैँ अहोरात्र खटिनुपर्ने, कहाँ छ र सजिलो विदेश गएर पैसा कमाउनु ! मेचमा राखेको चिया सेलाउन लाग्यो, यतिका घाम झुल्किसकेको छ अझै चन्द्र उठ्ने सुर नदेखेपछि उनले बिस्तारै उनको जीउ हल्लाइन् तर ऊ त अझै कोल्टो पो फेरेछ । बिस्तारै चन्द्रको माथ सहलाउँदै हातभरिको चुरालाई नियाल्दै मख्ख परिन् इजोरिया । हिजो मात्रै हटियाबाट वसन्त ऋतुको उपहारस्वरूप पहेलो र रातो चुरा ल्याइदिएका थिए चन्द्रले । गोरो नाडीमा कम्ता सुहाएको थिएन ती नारंगी रंगीन चुराहरू । बाबाले यत्तिकै उनको नाम राखेका होइनन् इजोरिया । (शुक्लपक्ष) इजोरियामा जन्मेकी कारी बरैको पूरै खानदानमा नै उनी सबभन्दा उज्याली ! एक त १८ वर्षअघिको मधेसी समाज र त्यसमा पनि जेठी छोरीपछिकी अर्की छोरी, जन्मेको सुनेर कम्ता रुवावासी गरेकी थिइनन् उनकी हजुरआमा । यसपालि त वंश चलाउने नाति होला भन्ने ठूलो आस थियो उनको । तर न्वारनको रात बुहारीले काँखमा राखिदएपछि इजोरियाको सौन्दर्य देखेर खित्का छाडी हाँसेकी थिइन् बुढीमाउ पनि । इजोरियालाई थाहा थियो चन्द्रलाई चुराको झंकार साह्रै मन पर्छ, दुवै हात उनको काननेरि लगेर चुरा बजाउन थालेपछि मात्र उठेको थियो त्यो बिहान ऊ । जुरुक्क उठेर बेस्सरी आलिंगनमा कँस्दै उनको माथलाई चुमेका थिए चन्द्रले, समरभूमिमा होमिनुअघि योद्धाले चुमेको जस्तो थियो त्यो मायाको चुम्बन !
साँझ करिब ५ बज्दो हो, चन्द्र पानपसलतिर लाग्यो । वैदेशिक रोजगारबाट ल्याएको थोर बहुत कमाइले ऊ चोकमा एउटा सानोतिनो पानपसल थापेको छ, जसमा बाउ–छोरा पालैपालो बस्ने गर्छ । साँझ पाँच बजे इजोरिया पनि फुर्सतमै भइन् । झन् चन्द्र पनि पसलतिर लागेपछि इजोरियालाई साथी कोही भएन । सासू र जेठानीसित धेरै बोल्ने धक अझै खुलेको छैन उनको । एक्लो के गरूँ के न गरूँजस्तो भयो उनलाई । त्यसैले उनी पूवारी खिड्कीबाट बाहिर नियाल्न थालिन् । टाढा–टाढासम्म फैलिएको गहुँ खेतपारि ठूलो मञ्च बनाइएको थियो । एकपछि अर्को नेता भाषण गर्दै जाँदा हजारौँको संख्याले एकैचोटि बजाएको तालीको गडगडाहट र अर्कोतिर जय मधेसको गगनभेदी गुन्जायमान स्वरले त्यो साँझ पूरै गाउँलाई नै तानेको थियो । सायद त्यसैले होला बालकदेखि वृद्धसम्म घर–घरबाट निस्केर त्यो साँझको दृश्य अवलोकनमा लीन देखिन्थे । हजारौँको संख्यामा तैनाथ प्रहरीको घेरा पार गर्न खोज्ने आक्रोशित पक्षलाई प्रहरीले डन्डा लिएर लखेटेको दृश्य टाढाबाट पनि स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
पोहोर मधेसमा लाखौँको संख्यामा शान्तिपूर्ण मानव साङ्लोमा साथ दिन इजोरिया पनि नगएकी होइनन् । साहै्र मन परेको थियो उनलाई त्यो शान्तिपूर्ण विरोधको स्वरूप । तर भोलिपल्टको समाचारपत्रमा मानव साङ्लोलाई झिँगा–साङ्लो भनेर मानव जातिको नै खिल्ली उडाउने एक जना ठूला पार्टीका नेताको व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्तिले निकै चित्त दुखाएको थियो उनको । अझै त्यही पार्टीका एक जना नेताले त मधेसलाई धोती प्रदेश नै भन्न भ्याएछन् । के हो यो धोती–टोपीको लडाइँ ? एउटै देशको परिधिभित्र बसेका हामी सबै नेपाली नै होइन र ? यो देश भनेको हाम्रो पनि हैन र ? हामी सबैको रगतको रंग उही रातो, छालाको रंग गोरो र कालो भएर कसैलाई राष्ट्रवादी र कसैलाई अराष्ट्रवादी भन्न मिल्छ ? कति सस्तो परिभाषा बनाइएको छ, यो राष्ट्रियताजस्तो गहन शब्दावलीको, जसलाई जसरी मन लाग्यो आफ्नै अनुकूल व्याख्या गर्न खोज्ने । राष्ट्रियताको भावना त मान्छेको अन्तरमनबाट उत्पन्न हुने हो, व्यवहारबाट झल्किने तत्त्व हो राष्ट्रियता ! आफ्नो मुलुकको शक्तिबोध र सौन्दर्यबोधको ज्ञान हुनु हो राष्ट्रियता । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको चर्चा गर्दा मधेसबिनाको नेपाल भन्न मिल्छ ? अनि मधेसीहरूले पटक–पटक आफ्नै देशमा म नेपाली हूँ भनेर परिचय दिनुपर्ने कस्तो विडम्बना ? एउटै देशभित्र विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कति, वेशभूषाको बाहुल्य भएको विविधतामा एकताको देश हो नेपाल । हामी दसैँ, तिहार, छठ, होली सधैं सँगै मनायौँ । आज आएर यो पहाडी–मधेसी किन ? होलीमा पोखरेल काकाले मेरी आमालाई भाउजू भन्दै रंग अबिर खेल्नुहुन्छ । मेरी आमाको हातको मालपुवा र पोखरेल काकीको सेलरोटी सधैं एकसाथ बाँडेर नै खायौँ हामी तर आज हामीबीच यो लडाउने भिडाउने काम किन ? मधेसका जनताको भावनालाई उहिले नै बुझिदिएको भए, आज मधेसको नाममा राजनीति खेती गर्ने च्याउसरी न त यति पार्टी हुन्थे न त विखण्डवादी तत्त्वहरू नै सल्बलाउने थिए । तर, आफूलाई राष्ट्रवादी र आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी भन्नेहरूले सधैं मधेसीमाथि शंका मात्र गरिरहे ।
मधेस सबैलाई चाहिने तर मधेसीले अधिकारको कुरा गर्दा ऊ भारतीय हुने ? हो, हाम्रो भूगोल दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रसित जोडिएको छ, अनुहार–व्यवहार मिल्छ तर यसको अर्थ हामी हाम्रो देशलाई नै भारतसित मिलाउन खोजेका छौँ भन्ने आशंका हामीमाथि किन ? याद छ इजोरियालाई गत साउनको तिलाठी बाँध प्रकरणमा लाठी खाएर भए पनि प्रतिकारमा उत्रेका हाम्रै नेपाली बाबा पुर्खा होइन ? अझै सीमा सुरक्षाका लागि हामी ज्यान फाल्न तयार छौँ । तर हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आशंका किन ? बेपत्ता प्रश्नहरूको भुइँचालो उठेको छ, आज इजोरियाको मन मस्तिष्कभित्र ।
२०६३ को माघे मधेस आन्दोलनमा आठ वर्षकी फुच्ची बालिका थिएन उनी । बाबा माघको कठ्यांग्रिने जाडोको परवाहसमेत नगरी नांगै खुट्टा मैदानमा दौडिनुहुन्थ्यो र इजोरिया बाबालाई पछ्याउँदै । आज पनि बाबा नांगै खुट्टा हिँड्नुपर्‍या छ एक जोर जुत्ता र लुगाका लागि हामीजस्ता गरिबलाई दसैँ–तिहार नै कुर्नुपर्ने । भाइ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने मन गरे पनि सरकारीमै पढाउनुपर्ने आर्थिक विवशता । तर मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरू काठमाडौंमा घर–बंगला, गाडी नहुने सायद विरलै नेता छन् । आफू काठमाडौं बसेर चिया–कफी तताउने र हामीलाई मधेस तताउन लगाउने ? विगत दस वर्षको अन्तरालमा पटक–पटक सत्ताका स्वाद चाखेका मधेसी नेताहरूले के विकास गरे मधेसमा ? बर्सेनि करोडौंको बजेट आउँछ, किन मधेसमा बाटोघाटो उस्तै ? विगत १० वर्षको अन्तरालमा लाखौँ युवा बिदेसिने गरेका छन् । जिउँदोको सहाराको त के कुरा मर्दाको मलामी जाने पनि युवाहरूलाई औँलाले गनेर बोलाउनुपर्ने अवस्था छ यहाँ, जे जति बाँकी छन् ती पनि साँझ–बिहान चोकमा जम्मा भएर राजनीतिक गफ चुट्नुबाहेक केही काम छैन तिनको । मुलुकको सबभन्दा बढी रेमिटयान्सको हिस्सा बनेका मधेसी युवाहरूका लागि खै त रोजगारी र व्यवसायका व्यवस्थापन र चिन्तन ? समतल भूमि र प्रशस्त विकासको सम्भावना बोकेको मधेसको विकासका लागि किन मधेसका नेताहरू आन्दोलन गर्दैनन् ? विरक्त लाग्छ इजोरियालई यस्तो राजनीतिक गतिविधि देखेर ।
साँझको करिब साढे पाँच बजेतिर होला परबाट धाँय धाँयको लगातार चार/पाँचपटक आवाज सुनिन् इजोरियाले, धूवाँको एक मुस्लो गोधूलि साँझलाई अझै धमिल्याएको थियो त्यो बेलुकीपखलाई । चारैतिर भीड तितरबितर हुँदै भागाभाग हुन थाल्यो बचाउ–बचाउको गुहार सर्वत्र सुनिन थाल्यो । इजोरियाको मुटुको धड्कन केही अनिष्टको आशंकाले अचानक तीव्र हुन लाग्यो । मनमनै गुहार्न लागिन् देवी–देवतालाई इजोरियाले । हे भगवान् ! रक्षा गर्नु सबैलाई । कत्तै केही भएको त हैन, नत्र यो भागाभाग किन ? कहीँ कत्तै कुनै अनिष्ट हुँदा मान्छे सर्वप्रथम आफ्नो आफन्तलाई नै सम्झन्छ यो मानवीय प्रवृति र स्वभाव हो । आधी घण्टाअघि मात्र इजोरियासित छुटेका चन्द्रको चिन्ताले उनलाई बग्रेल्ती सताउन थाल्यो । बरु, आज पसल नगए नि हुन्थ्यो ! पसल पुग्यो कि बाटैमा होला ऊ ? कति सम्झाएँ आज पसल नजाऊ भनेर तर लक्का जवान घर बसेर मात्र के गरून् ? सबलाई थाहा थियो आज झडपको सम्भावना छ, अनि किन त्यो ठूलो पार्टीले कार्यक्रम गर्ने हठ गरेको होला ? त्यो पनि हाम्रै गाउँमा !
माय गे माय जुलुम भगेलौ चनरवा नै रहलौ अहि संसारमे । छाती पिट्दै रमधनियाँ काकी आँगन पसिन् । अन्तिम वाक्य पूरा नसुन्दै इजोरियाको आँखा वरिपरि अन्धकार छायो । एक छिनमै गाउँ स्तब्ध भयो । यस्तो डर, त्रास र सन्नाटा कहिले छाएको थिएन त्यो गाउँमा । भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चन्द्रसहित अनाहकमा प्रहरीको गोलीका सिकार भएका निर्दोषहरूको मृत्युको मूल्य दस–दस लाख तोकेको खबर रेडियोले फुक्यो, अखबारका पानाहरूमा छापिए । इजोरिया र उनको परिवारलाई सहानुभूति दिन मानव अधिकारकर्मी, नागिरक समाज सरकारी गैरसरकारी संघसंस्थाका पदाधिकारी, अधिकारकर्मीहरूको ओइरो लाग्न थालेको छ आजभोलि । सबले मोटा–मोटा प्रतिवेदन बनाउनेछन् तर किन ? सबलाई थाहा छ ।
यतिखेर एकअर्कालाई हेर्नै नसक्ने गरी कटाक्ष र तीक्ष्ण व्यंग्य प्रहार गरिरहहेका राजनीतिक दलहरू भोलि सत्ताको अंकगणितीय खेलमा एक ठाउँ आउन बेर छैन, किनकि राजनीतिमा न त कोही कसैको चिरकालीन शत्रु हुन्छ न त मित्र नै । यो राजनीतिको खेल नै यस्तै हो । तर बिचरी इजोरियाको मनभित्र खेलिरहेका हजारौँ भावनाका खेलहरूलाई कसले बुझ्ने होला ? इजोरिया फेरि चम्किन त चन्द्र नै चाहिन्छ । हैन र ?
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७३ ०९:४९